Xubintii Ciyaaraha: Chelsea fkf Roma? (dhegayso) – Radio Daljir
Xubintii Ciyaaraha: Chelsea fkf Roma? (dhegayso)
Oktoobar 18, 2017 1:00 b 0
Waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsana koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, heerka guruubyada. Kooxaha sannadka horyaalka Ingiriiska koobkan u matalaya ayaa soo bandhigay kubbad aan horay looga baran 5 sano ee ugu danbaysay.
Dhanka kale, waxaa la ciyaari doona kulamo kale oo ka tirsan koobka UEFA Champions League, heerka guruubyada, sida ay ballantu tahayna kooxda reer London ee Chelsea ayaa kulan aad u adag la ballansan dhiggeeda As Roma.